Archive du 20200203
Raharaha Tanamasoandro Tsy milefitra ny vahoaka
Niara-nanao santa-bary sy fifampiarahabana nahatratra ny taona ny mponin’Ambohitrimanjaka, Fiombonana, Ankadimanga, Ambohidrapeto ny sabotsy teo.
Rodoben’ny mpanohitra Tafatsangana ny ao Toamasina
Hentitra amin’ny fanaraha-maso ny raharaham-pirenena ny Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny demokrasia eto Madagasikara na RMDM.
Jeneraly Ravelonarivo Jean Voafidin’ny Kongresin’ny antoko ABA ho filohany
Nanatanteraka kongresy tsy ara-potoana tetsy amin’ny Big Bang Behoririka tamin’ny zoma faha-31 janoary teo ny antoko politika ABA “Antokom-Bahoaka Malagasy”
Seranam-piaramanidina Ivato Mpandeha iray ahiana ho tratry ny Coronavirus
Nahitana tranga ahiana ho Coronavirus teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato omaly, raha ny loharanom-baovao. Andrasana izay mety ho fanazavana ofisialy, fa raha ny loharanom-baovao tsy ofisialy,
Fanafihana ara-informatika 1 hatramin`ny 5 isam-bolana ny fitarainana
10% -15%-n`ny fitarainana tonga eny amin`ny rafitra misahana ny ady amin`ny « cybercriminalité » no mifandray amin`ny fangalarana antontam-baovao na ny atao hoe « PIRATAGE ».
MINISITRY NY FILAMINAM-BAHOAKA “Hamafisina ny fiaraha-miasa amin’ny tafika”
Iray andro taorian'ny fandraisany toerana amin'ny maha minisitry ny filaminam-bahoaka azy dia tonga nanome voninahitra ny andron’ny manamboninahitra lefitra tany amin'ny ENSOA
Fiadiana ny tompondakan’ny « Pancrace » Nahomby ny andiany voalohany
Tontosa tetsy amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano omaly alahady 02 febroary 2020 ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara
Taranja Tolona Hanainga anio ho any Algerie ireo Atleta Malagasy
Ny vaovao farany azo mikasika ny olana mianjady eo amin’ny taranja tolona Malagasy amin’ny tsy fahazoan’ny delegasiona ahitana olona 6
Edito Sasatry ny manarina
Anisan’ny olana fototra naverimberin’ireo teknisianina sy manampahaizana ho sakan’ny fampandrosoana ny firenena hatramin’izay ny tsy fisian’ny fitoizan’asa na « continuité de l’Etat ».
Asa fanaovan-gazety Nodimandry i Jacob Andriambelo
Nodimandry ny faran’ny herinandro lasa teo ny mpanao gazety zokiolona Jacob Andriambelo.
Fahatongavan’ny KFC teto Vao mainka nampiakatra ny Gastro Pizza
Vao mainka nampiakatra ny orinasa Malagasy La gastronomie pizza ny fisian’ny orinasa vahiny KFC.
Hetra takiana eto Madagasikara Mampitaraina ny mpandraharaha madinika
Ny 5%-n’ny vola miditra amin’izy ireo isan-taona, raha ny fanazavan’ny mpandraharaha madinika iray misehatra amin’itony antsoina hoe “Freelance”
Fanadihadiana mahakasika ny fahantrana Hiankinan’ny drafi-pampandrosoana rehetra
2 herinandro izay no niaingan’ireo mpiasa miisa 124 handrakotra ny faritra 22 manatanteraka ny fanadihadiana mahakasika ny fahantrana EPM 2020 izay iandraiketan’ny INSTAT Anosy Ny fanaovana ity fanadihadiana ity dia hiteraka famoahana
Antananarivo Renivohitra Hampitomboina ny faritra maitso
Ao anatin'ny ezaka fanatsarana endrika ny tanànan'Antananarivo dia notanterahina ny sabotsy lasa teo ny fanombohana ny taom-pambolen-kazo ho an'ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA)
Antananarivo Renivohitra Kely dia manao firaisana ny zazavavy
Lasa aloha loatra ny firosoan’ny tanora zazavavy sy zazalahy amin’ny fanaovana firaisana ara-nofo eto amintsika. Raha araka ny fanadihadiana nataon’ny fikambanana Tanora Garan’teen
PEPINIERE JOACHIN Mivarotra ireo zanakazo efa lany tamingana
Miaina tanteraka ao anatin’ny fiovaovan’ny toetr’andro isika ankehitriny.
FANOLOANA FANTSON-DRANO TRANAINY Efa tonga ireo teknisianin’ny kaompania TRG
Efa eto an-toerana ireo teknisianin'ny kaompania TRG avy atsy Afrika Atsimo izay hiara-kiasa amin'ny JIRAMA amin'ny fanoloana ireo fantsona tranainy, anisan'ny mampananosarotra ny famatsiana rano fisotro madio amin'ny toerana maro eto Antananarivo.
Fanampiana ireo traboina Tonga ny sambo lehibe avy any Inde
Noraisin’ny Praiminisitra Ntsay Christian sy ny Masoivohon’i Inde eto Madagasikara Atoa Abhay Koumar ny faran’ny herinandro teo tao
Hain-trano teny Anjanahary 1 maty, 114 tsy manan-kialofana
Ny harivan`ny sabotsy 01 febroary lasa teo, tamin`ny telo ora sy sasany no nitrangan`ny hain-trano tao Anjanahary.
Fiatrehana loza voajanahary Nahazo 18 tapitrisa i Madagasikara
Nisitraka 15 tapitrisa dolara avy amin`ny IDA sy 3 tapitrisa dolara avy amin`ny AFD (Agence française de veloppement) i Madagasikara natao atrehina ny rotsak`orana sy ny fiakaran`ny rano farany teo.
Minisitra lefitry ny tanàna vaovao Ho avy masiaka
Natokana ao anatin`ny governemanta vaovao am-perinasa ny alakamisy lasa teo ny ministera lefitra misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana.
Fanafarana solika Ny orinasa TOTSA no nahafeno ny fepetra
Ny orinasa Total Oil Trading SA na ny TOTSA irery manomboka ny sabotsy lasa teo no manafatra ny solika avy any ivelany eto Madagasikara.
Fametrahana ny e-visa 200 ireo polisy hofanina mandritra ny 2 taona
Hisintonana ary hampitomboina ireo mpizahatany no tanjona hametrahana ny e-visa.
MAHANORO Tovolahy 17 taona matin’ny fitsaram-bahoaka
Tovolahy iray vao 17 taona monja no matin’ny fitsaram-bahoaka ny faran’ny herinandro teo tany amin’ny distrikan’i Mahanoro.